I-Visa Esemthethweni yaseCanada | ICanada Visa Online | I-Visa Yezokuvakasha YaseCanada
Ukuvakashela Izimpophoma ZaseNiagara
Ukufaneleka kweCanada eTA
Canada eta isicelo
ICanada eTA (Ukugunyazwa Kokuhamba Nge-elektroniki)
I-eTA Canada Visa (i-Canada Visa Online) iyimvume yokuvakasha edingekayo kubahambi abavakashela e-Canada ngebhizinisi, ezokuvakasha noma ngezinjongo zokuhamba. Le nqubo eku-inthanethi ye-Visa ye-elekthronikhi yaseCanada yaqalwa kusukela ngo-Agasti 2015 ngabakwa- Uhulumeni waseCanada, ngenhloso yokunika amandla noma yibaphi babavakashi abafanelekile besikhathi esizayo ukuthi bafake isicelo se-eTA eCanada.
1. Qedela uhlelo lwe-eTA
2. Thola i-eTA nge-imeyili
3. Ngena eCanada
Iyini i-Canada eTA noma i-Canada Visa Online?
Njengengxenye yesivumelwano sayo ngokuhlanganyela ne-United States ukuvikela kangcono imingcele yamazwe womabili, kusukela ngo-Agasti 2015 kuya phambili iCanada yaqala a Uhlelo lwe-Visa Waiver lwamazwe athile akhululiwe eVisa izakhamizi zazo ezingaya eCanada ngokufaka isicelo se-Electronic Travel Authorization Document esikhundleni salokho, eyaziwa ngokuthi yi-eTA yaseCanada noma ICanada Visa Online.
I-Canada Visa Online isebenza njengombhalo Wokuhoxiswa kwe-Visa kubantu bangaphandle abavela emazweni athile afanelekile (I-Visa Exempt) abangaya eCanada ngaphandle kokuthola i-Visa kuNxusa LaseCanada noma i-Consulate kodwa esikhundleni salokho bavakashele izwe ku-eTA yaseCanada engakwazi. faka isicelo futhi utholwe ku-inthanethi.
ICanada eTA yenza umsebenzi ofanayo noweCanada Visa kepha itholakala kalula kakhulu futhi inqubo iyashesha futhi. ICanada eTA isebenza ngezinhloso zebhizinisi, ezokuvakasha noma zokuhamba kuphela.
Isikhathi sokusebenza se-eTA yakho sihlukile kunesikhathi sokuhlala. Ngenkathi i-eTA isebenza iminyaka emi-5, ubude bakho abungekhe budlule izinyanga eziyisithupha. Ungangena eCanada nganoma yisiphi isikhathi ngaphakathi kwesikhathi sokusebenza.
Inqubo esheshayo edinga ukuthi ugcwalise ifayela le- Ifomu Lokufaka Isicelo seCanada Visa online, lokhu kungaba imizuzu engaphansi kwemihlanu (5) ukuqeda. ICanada eTA ikhishwa ngemuva kokuthi ifomu lesicelo ligcwaliswe ngempumelelo nemali ekhokhwa ngumfakisicelo online.
Isikhulu se-CBSA (Canada Border Services Agency)
Siyini isicelo se-Visa yaseCanada?
Isicelo seCanada Visa iyifomu eliku-inthanethi elisebenza ngogesi njengoba lituswe ngabakwa-Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), okumele ligcwaliswe yilabo abahlose ukungena e-Canada ohambweni olufushane.
Lesi sicelo se-Visa yaseCanada sithatha indawo yenqubo esephepheni. Futhi, ungagcina uhambo oluya eNxusa LaseCanada, ngoba i-Canada Visa Online (eTA Canada) ikhishwa nge-imeyili ngokumelene nemininingwane yakho yepasipoti. Iningi labafakizicelo lingaqedela i-Canada Visa Application Online ngaphansi kwemizuzu emihlanu, futhi badikibaliswe yi- Uhulumeni waseCanada kusukela ekuvakasheleni Inxusa LaseCanada ukuze usebenzise inqubo esekelwe ephepheni. Udinga isiphequluli esixhumeke ku-inthanethi, ikheli le-imeyili kanye ne-Paypal noma ikhadi lesikweletu/ledebhithi ukuze ukhokhe lezi zimali ku-inthanethi.
Kanye, Isicelo se-Visa yaseCanada sigcwaliswa ku-inthanethi kulokhu iwebhusayithi, ihlolwe ngabakwa-Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ukuze bahlole ukuthi ungubani. Iningi lezicelo ze-Visa yaseCanada zinqunywa ngaphansi kwamahora angama-24 kanti amanye angathatha amahora angama-72. Isinqumo se-Canada Visa Online sithunyelwa kuwe ngekheli le-imeyili elinikeziwe.
Uma umphumela we-Canada Visa Online usunqunyiwe, ungagcina irekhodi le-imeyili ocingweni lwakho noma uliphrinte ngaphambi kokuvakashela i-Cruise Ship noma Isikhumulo sezindiza. Awudingi isitembu esiphathekayo kupasipoti yakho ngoba abasebenzi bokufika basesikhumulweni sezindiza bazohlola i-visa yakho kukhompyutha. Udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi imininingwane egcwaliswe kuSicelo Se-Canada Visa kule webhusayithi kufanele ifane ncamashi negama lakho lokuqala, isibongo, imininingwane yokuzalwa, inombolo yepasipoti kanye nodaba lwepasipoti kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi kwepasipoti ukuze ugweme ukwenqatshwa esikhumulweni sezindiza isikhathi sokugibela indiza.
Ubani ongafaka isicelo se-Canada Visa Online (noma i-Canada eTA)
Izakhamuzi zamazwe alandelayo kuphela ukhululiwe ekutholeni iVisa yokuya eCanada futhi kufanele ufake isicelo esikhundleni se-eTA eCanada.
Izakhamizi zaseCanada nase-United States badinga kuphela amaPasipoti abo aseCanada noma e-US ukuya eCanada. Izakhamuzi Zaphakade Ezisemthethweni zase-US, noma kunjalo, abaphethe i- Ikhadi le-US Green, kufanele ufake isicelo se-Canada eTA.
Kuphela yilezo zivakashi eziya eCanada ngomoya ngendiza yezentengiselwano noma eqashiwe ezidinga ukufaka isicelo se-eTA eCanada.
UK - Brit. phesheya kwezilwandle.
ICanada eTA inezinhlobo ezine, noma ngamanye amagama, ungafaka isicelo se-Canada eTA lapho inhloso yokuvakasha kwakho ezweni ingenye yalezi ezilandelayo:
Ukuhamba noma ukumiswa lapho kufanele ume esikhumulweni sezindiza noma edolobhaneni laseCanada isikhathi esifushane kuze kufike indiza yakho elandelayo lapho uya khona.
Ezokuvakasha, ukubona indawo, ukuvakashela umndeni noma abangane, beza eCanada ngohambo lwesikole, noma ukuya esifundweni esifushane esinganikezi noma yiziphi izikweletu.
Ukuze ibhizinisi izinhloso, kufaka phakathi imihlangano yebhizinisi, ibhizinisi, ingcweti, isayensi, noma ingqungquthela yezemfundo noma umhlangano, noma ukulungisa izindaba zefa.
Ukuze ukwelashwa okuhleliwe esibhedlela saseCanada.
Imininingwane edingekayo eCanada eTA
Abafakizicelo baseCanada eTA bazodinga ukuhlinzeka ngemininingwane elandelayo ngesikhathi sokugcwalisa online ICanada eTA Ifomu Lokufaka Isicelo:
Imininingwane yomuntu efana negama, indawo yokuzalwa, usuku lokuzalwa
Inombolo yephasiphothi, usuku lokukhishwa, usuku lokuphelelwa yisikhathi
Imininingwane yokuxhumana efana nekheli ne-imeyili
Ngaphambi kokufaka isicelo se-Canada eTA
Abahambi abahlose ukufaka isicelo online ku-Canada eTA kumele bagcwalise le mibandela elandelayo:
Iphasiphothi evumelekile yokuhamba
Iphasiphothi yomfakisicelo kumele isebenze okungenani izinyanga ezintathu ngemuva kosuku lokuhamba, usuku oshiya ngalo iCanada.
Kufanele futhi kube nekhasi elingenalutho kwiphasiphothi ukuze i-Customs Officer ikwazi ukugxisha ipasipoti yakho.
I-eTA yakho yaseCanada, uma ivunyelwe, izoxhunyaniswa nePasipoti yakho evumelekile, ngakho-ke futhi kudingeka ukuthi ube nePasipoti evumelekile, engaba iPasipoti ejwayelekile, noma iPasipoti Esemthethweni, Yezombusazwe, noma Yesevisi, konke okukhishwe amazwe afanelekile .
I-ID ye-imeyili evumelekile
Umfakisicelo uzothola iCanada eTA nge-imeyili, ngakho-ke i-ID ye-imeyili evumelekile iyadingeka ukuthola iCanada eTA. Ifomu lingagcwaliswa izivakashi ezihlose ukufika ngokuchofoza lapha Ifomu lesicelo se-eTA Canada Visa.
Kusukela eTA Canada Ngefomu lesicelo itholakala kuphela ku-inthanethi, ngaphandle kokulingana nephepha, kudingeka ikhadi lesikweletu / lasebhange elivumelekile noma i-akhawunti ye-PayPal.
Ukufaka isicelo se-Canada eTA
Izizwe ezifanelekile zangaphandle ezifisa ukuya eCanada zidinga ukufaka isicelo se-eTA yeCanada online. Yonke le nqubo isuselwa kuwebhu, kusukela ekusetshenzisweni, ekukhokhweni nasekuhanjisweni kuze kwaziswe ngomphumela wohlelo. Umfakisicelo kuzodingeka agcwalise ifomu lesicelo le-Canada eTA ngemininingwane efanele, kufaka nemininingwane yokuxhumana, imininingwane yangaphambilini yokuhamba, imininingwane yepasipoti, nolunye ulwazi lwangemuva olufana nerekhodi lezempilo nelobugebengu. Bonke abantu abaya eCanada, kungakhathalekile ukuthi badala kangakanani, kuzofanele bagcwalise leli fomu. Uma esegcwalisiwe, umfakisicelo kuzofanele enze inkokhelo yesicelo se-eTA esebenzisa ikhadi lesikweletu noma lasebhange bese ehambisa isicelo. Izinqumo eziningi zifinyelelwa kungakapheli amahora angama-24 futhi umfakisicelo waziswa nge-imeyili kepha amanye amacala angathatha izinsuku ezimbalwa noma amasonto ukucubungulwa. Kungcono ukufaka isicelo se-eTA yeCanada ngokushesha nje lapho usuqede izinhlelo zakho zokuhamba futhi kungakadluli isikhathi Amahora angama-72 ngaphambi kokungena kwakho okuhleliwe eCanada . Uzokwaziswa ngesinqumo sokugcina nge-imeyili futhi uma kwenzeka isicelo sakho singavunyelwa ungazama ukufaka isicelo seCanada Visa.
Sithatha isikhathi esingakanani isicelo seCanada eTA ukucubungula
Kuyalulekwa ukufaka isicelo se-Canada eTA okungenani amahora angama-72 ngaphambi kokuthi uhlele ukungena ezweni.
Ukusebenza kwe-Canada eTA
I-eTA yeCanada iyi isebenza isikhathi esiyiminyaka emi-5 kusukela ngosuku lokukhishwa kwayo noma ngaphansi uma iPasipoti elixhunywe ngogesi liphela ngaphambi kweminyaka engu-5. I-ETA ikuvumela ukuthi uhlale eCanada ukuthola ubuningi bezinyanga eziyi-6 ngasikhathi kepha ungayisebenzisela ukuvakashela izwe kaninginingi esikhathini sokusebenza kwalo. Kodwa-ke, isikhathi ozovunyelwa ukuhlala kuso isikhathi esithile sizonqunywa yizikhulu zomngcele ngokuya ngenhloso yakho yokuvakasha futhi zizofakwa isitembu ku-Passport yakho.
I-eTA yaseCanada iyadingeka ukuze ukwazi ukugibela indiza ebheke eCanada njengoba ngaphandle kwayo ungeke ungene kunoma iyiphi indiza eboshwe eCanada. Noma kunjalo, Abokufika, Ababaleki Nobuzwe Canada (IRCC) noma Izikhulu zomngcele waseCanada angakunqabela ukungena esikhumulweni sezindiza noma ngabe ungumnikazi we-Canada eTA ovunyelwe uma ngesikhathi sokungena:
awunawo wonke amadokhumenti akho, njengepasipoti yakho ngokulandelana, ezobhekwa ngabaphathi bomngcele
uma ubeka noma iyiphi ingozi empilweni noma kwezezimali
futhi uma uke waba nomlando wobugebengu / wamaphekula wangaphambilini noma izingqinamba zangaphambilini zokufuduka
Uma uhlele wonke amadokhumenti adingekayo e-Canada eTA futhi wahlangabezana nazo zonke izimo zokufaneleka ze-eTA yaseCanada, khona-ke usulungele faka isicelo se-Canada Visa Online ofomu lakhe lesicelo lilula futhi liqondile. Uma udinga izincazelo kufanele thintana nosizo lwethu ukwesekwa nokuholwa.
Amadokhumenti umfakisicelo waseCanada Visa Online angase abuzwe emngceleni waseCanada
Umfakisicelo angacelwa ukuthi anikeze ubufakazi bokuthi bangazisekela ngokwezimali futhi bakwazi ukuzondla lapho behlala eCanada.
Phambili / buyisela ithikithi lendiza.
Umfakisicelo kungadingeka ukuthi akhombise ukuthi uhlose ukushiya iCanada ngemuva kwenhloso yohambo lapho i-Canada eTA isetshenziselwe khona.
Uma ofake isicelo engenalo ithikithi lokuya phambili, bangahlinzeka ngobufakazi bemali kanye namandla okuthenga ithikithi ngokuzayo.
Izinzuzo Zokusebenzisa i-Inthanethi
NGEMINYE YEMIHLANGANO EBALULEKE KAKHULU YOKUFAKA ISICELO SE-CANADA YAKHO ETA KU-ONLINE
24/365 Isicelo se-Inthanethi.
Akukho mkhawulo wesikhathi.
Ukubuyekezwa kwesicelo nokulungiswa ngochwepheshe be-visa ngaphambi kokulethwa.
Inqubo yesicelo eyenziwe lula.
Ukulungiswa kwemininingwane engekho noma engalungile.
Ukuvikelwa kobumfihlo nefomu elivikelekile.
Ukuqinisekiswa nokuqinisekiswa kwemininingwane eyengeziwe edingekayo.
Ukusekelwa Nosizo 24/7 nge-E-mail.
Ukubuyiselwa Kwe-imeyili kwe-eVisa yakho uma kungenzeka ulahlekelwe.
Ukubuyiselwa Kwemisebenzi uma i-eVisa yakho yenqatshwa.
Azikho izindleko zokuthenga zeBhange ezingeziwe ezingama-2.5%.